स्तन करविरुद्धको नाङ्गेली विद्रोह ! स्तन काटेर विद्रोह
शिक्षा र महिला सशक्तिकरणमा भारतको केरला अग्रणी राज्य हो । हिन्दु धर्मग्रन्थअनुसार केरलाको स्थापना परशुराम ऋषिले गरेको तथ्य पनि फेला पर्छ । परशुरामलाई भगवान् विष्णुको छैटौं अवतार पनि मानिन्छ ।
गौरवमय इतिहास बोकेको केरला १८औं शताब्दीताका मानव इतिहासकै कृतघ्न परम्परामा डुबेको थियो । १८औं शताब्दी केरलाका लागि ‘मुलक्करम’को समय थियो । अर्थात् राज्य सञ्चालनका लागि महिलासँग स्तन कर संकलन गरिन्थ्यो । प्राकृतिक रूपमा प्राप्त स्तनको कर तिर्नुपथ्र्यो महिलाले ।
१८औं शताब्दीको उत्तराद्र्ध र १९औं शताब्दीको सुरुवाती समयमा केरलाको त्रावणकेर राज्यको बागडोर हिन्दु धर्मावलम्बीको हातमा थियो । महिलाले समेत राजकाज चलाउने सुविधा भएपनि राज्यसञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने त्रावणकोरका दलित र गरिब महिलाले आफ्नो स्तनको कर तिर्नुपथ्र्यो ।
स्तनको आकारअनुसार कर !
त्रावणकोरका दलित र गरिब महिलाले स्तनको आकारअनुसार राज्यले तय गरेको कर तिर्नुपथ्र्यो । स्तन महिलाको सौन्दर्य र मातृत्वको प्रतीक हो ।प्रकृतिप्रदत्त अंग हो । तर, केरलाका दलित महिलाका लागि स्तन नै अभिषाप थियो ।
त्यसमाथि परिवारका बहुसंख्यक महिलाको स्तनको आकार ठूलो भयो भने त परिवार गरिबीको खाडलमा गाडिने पक्का हुन्थ्यो । किनभने स्तनको आकार जति ठूलो भयो त्यति धेरै कर तिर्नुपथ्र्यो ।
गैरब्राम्हणले स्तन छोप्नै पाउँदैनथे
त्रावणकोरमा ब्राह्मणबाहेक अन्य महिलालाई स्तन ढाक्ने सुविधा थिएन । ब्राह्मण महिलाले मात्रै माथिल्लो शरीर ढाक्न पाउँथे । अन्य जातका महिलाले स्तन ढाक्नु राजद्रोहसरहको अपराध मानिन्थ्यो ।
स्तन त महिलाको हुन्थ्यो । तर, त्यसको अधिकार भने राज्यको हुन्थ्यो । र, राज्य गैरदलितको थियो ।
स्तन काटेर विद्रोह
सन् १८०३ मा एझवा (दलित) जातिकी महिला नाङ्गेलीको रगतले केरला रंगियो । नागेंली केरलाकी पहिलो महिला विद्रोही हुन् । अधिकारकर्मी हुन् । र, सहिद पनि हुन् ।
नाङ्गेलीको रगतको आहालमा डुबेर केरलाले आफ्नो नग्नता ढाक्यो । जसको अग्नि दाहमा सेकिएर केरलामा कठ्याङ्ग्रिएको मानवता फेरि ब्युँतियो । नाङ्गेलीको रगतसँगै केरलाको भूमिमा महिला विद्रोहको सूत्रपात भयो ।
त्रावणकोर राज्यका अधिकारी बारम्बार स्तन कर संकलनका लागि आएपछि गरिब नाङ्गेलीले कर अधिकारीलाई स्तन काटेर केराको पातमा बेरेर दिइन् । (तर, एकथरी कथाहरूमा भने नाङ्गेलीको स्तन कर अधिकारीले काटेका थिए भन्ने लेखिएको छ ।) नाङ्गेलीको स्तन काटिएको तथ्य अकाट्य छ ।
क्रुर सत्ताको शक्ति क्षीण पार्ने नाङ्गेलीका एक जोर स्तन क्रान्तिका बम थिए । नाङ्गेलीको स्तनबाट बगेको रातो रगतले केरलामा क्रान्तिको सूत्रपात भयो । नाङ्गेलीकै चितामा देहत्याग गरेर उनका पति चिरुकन्डनले सत्तालाई थप चुनौती दिए । क्रान्तिलाई आक्रोशमा बदले ।
त्रावणकोरको दरबारलाई नाङ्गेली घटनाले थर्कमान बनाएको थियो । स्तन कर र राज्यको विरोधमा त्रावणकोरका महिला र गैरदलित पुरुष भित्रभित्रै गुम्सिँदै गए । यो गुम्साहट ५ दशकसम्म रह्यो ।
नाङ्गेलीको मृत्युपछिका ५ दशक त्रावणकोरका महिलाका लागि संघर्षका दिन थिए । राज्यसँग टसलका दिन थिए । नाङ्गेलीको घटनाबाट त्रसित अनि आक्रोशित नादर जातिका महिलाले आफ्नो शरीर ढाक्न पाउनुपर्ने भन्दै राज्यसँग विद्रोह गरे ।
राज्यमा बढिहरको असन्तोष र विद्रोहलाई मत्तथर पार्न १८१२ मा गैरब्राह्मण महिलाले आंशिक रूपमा स्तन ढाक्न पाउने सुविधा दिइयो । यो सुविधा पनि नादर जातिको उपजाति नादन जातिका महिलालाई मात्र दिइएको थियो । यसअघि दलित मात्रै होइन, नायर र नंबुदिरीजस्ता ब्राह्मण जातीका महिलालाई पनि माथिल्लो अंग ढाक्न पाउने सुविधा थिएन ।
राज्यमा महिला विद्रोह चर्किन थालेपछि नंबुदिरी, नायर र नादन जातिका महिलालाई घर बाहिर निस्कदा माथिल्लो अंग ढाक्न पाउने सुविधा दिइयो । राज्यले महिलालाई फकाउन खोजेको थियो । भुलाउन खोजेको थियो । बाहिर निस्कँदा स्तन छोप्ने सुविधा पाएका गैरदलित महिलाले घरमा बस्दा र मन्दिर प्रवेश गर्दा भने स्तन खुल्लै राख्नुपथ्र्यो ।
राज्यले आंशिक रूपमै भए पनि माथिल्लो जातिका महिलालाई स्तन ढाक्ने सुविधा दियो । दलित भनिने नायर जातिका महिलाले अझै आफ्ना स्तन ढाक्न पाएका थिएनन् । उनीहरूले ब्राह्मण पुरुषका अगाडिआफ्नो वक्षस्थल खुल्ला राख्नुपथ्र्यो । उनीहरूका स्तनमाथि ब्राह्मण र गैरदलित पुरुषका कामुक दृष्टि परिरहन्थे ।
दलित र गैर दलित महिलामाथिको यो विभेदले आजित भएका दलित महिलाले वक्षस्थल ढाकेर त्रावणकोरको दरबार प्रागंणमा प्रवेश गरे । भनिन्छ, दलित महिलाले वक्षस्थल ढाकेर दरबारमा प्रवेशगरेपछि तत्कालीन रानी अत्तिंगलले कतिपय महिलाको वक्षस्थल काट्न लगाएकी थिइन् । राज्यको क्रुरता सहन गर्न नसकेर त्यहाँबाट धेरै दलित परिवार श्रीलंका बसाइँ सरे ।
विस्तार हुँदै गरेको अंग्रेजको प्रभावमा परेर कतिपय दलित महिला तथा पुरुषले धर्म परिवर्तन गरेर इसाई पनि भए । धर्म परिवर्तन गरेर दलित जातिका महिलाले आफ्नो वक्षस्थल सुरक्षित बनाउने बाटो रोजे ।
सन् १८१४ मा त्रावणकोरका दिवान कर्नल मुनरोले इसाई धर्म मान्ने सबै महिलालाई ब्लाउज लगाउन आदेश दिए । तर, मुनरोको आदेशको केही जोर चलेन । मुनरोकै सामुन्ने स्थानीय अदालतमा दलित महिलको स्तन ढाक्ने वस्त्र खोल्न लगाइयो । कुलिन वर्गका पुरुष र ब्राह्मण सत्तालाई दलित महिलाले वक्षस्थल ढाकेको सह्य भएन ।
क्रुर शासकलाई दलित महिलाले धर्म परिवर्तन गरेर वक्षस्थल छोपेको मन परेको थिएन । कुलिन वर्गका पुरुषले वक्षस्थल ढाकेका दलित महिलामाथि हमला सुरू गरे । धर्म परिवर्तन गरेर माथिल्लो अंग ढाकेका महिलालाई सार्वजनिक स्थलमा उभ्याएर माथिल्लो वस्त्र खोल्न बाध्य बनाइयो ।
तल्लो जातीका महिलालाई छुन नपरोस् भन्दै माथिल्लो जातिका पुरुषहरूले लामो लट्ठीको टुप्पोमा छुरी बाँधेर महिलाका स्तन ढाकिएका लुगा काट्न थाले । कतिपय दलित महिलालाई माथिल्लो वस्त्र लगाएको आरोपमा फाँसीसमेत दिइयो ।
सडकमा राजाको सवारी हुँदा नादर र नायर जातिका कुमारी केटीहरूले वक्षस्थल खुल्ला राखेर हातमा फूल लिएर राजाको स्वागतमा उभिनुपर्ने प्रचलन थियो । महिलाहरू घरको आँगन वा बार्दलीमा उभिएर राजाको स्वागत गर्थे । राजा र उनका सहयात्री यसरी महिलालाई अर्धनग्न बनाएर आनन्द उठाउँथे ।
१८२२ मा फेरि अंगे्रज शासकले इसाई धर्म मान्ने दलित महिलालाई माथिल्लो लुगा लगाउन पाउने सुविधा दिए । एकातर्फ अंग्रेज शासक इसाई धर्मको नाममा दलित महिलाको पक्षमा उभिएका देखिन्थे । अर्कोतर्फ ब्राह्मण राज्य इसाई धर्म र दलित महिलाकोे कदमप्रति रक्षात्मक भइरहेको थियो ।
इसाई धर्म मान्न थालेका दलित महिलाले वक्षस्थल ढाक्नथालेपछि त्रावणकोरका राजाले सन् १८२९ मा फेरि नयाँ आदेश जारी गरे । कुलिन र ब्राह्मण वर्गका पुरुषको विरोध र अनिच्छाका कारण राजाले मुनरोको आदेशविरुद्ध गएर तल्लो जातका कुनै पनि महिलाले माथिल्लो लुगा लगाउन नपाउने घोषणा गरे ।
इसाई धर्मको आडमा दलित जातका महिलाले माथिल्लो अंग ढाक्ने लुगा लगाउन पाएका थिए । राजाको यस्तो आदेशपछि उनीहरूको यो सुविधा पनि खोसियो । अमानवियता र अत्याचारको क्रुर बिन्दुमा राज्य पुगेपछि महिलाहरू फेरी विद्रोहमा उत्रिए । हिन्दु, ईसाई केही नभनिकन महिलाहरूले राजाको अवज्ञाको विरोध गरे ।
विद्रोहमा दलित जातिका महिलाहरू मात्रै होइनन्, पुरुष पनि सामेल भए । महिलाहरूको यो आन्दोलनमा केरलाका तत्कालीन हिन्दु गुरु नारायणले समेत सहयोग गरेका थिए । आक्रोशित दलित समुदायले माथिल्लो जातिका घर तथा पसल लुट्न थाले । उनीहरूको घरमा आगो लगाउन थालियो ।
केरलामा दलित महिलाको विद्रोहले उग्र रूप लिँदै गएपछि मद्रासका कमिश्नरले समेत केरलाका राजालाई महिलालाई माथिल्लो लुगा लगाउने सुविधा दिन अनुरोध गरेका थिए ।
महिलाको आन्दोलन, मद्रास कमिश्नर र अंग्रेजको दबाबका कारण तत्कालीन राजाले १८५९, जुलाई २६ तारिखमा सबै महिलाले माथिल्लो अंग ढाक्ने लुगा लगाउन पाउने सुविधा दिए ।
यता केरलाका दलित महिलाले स्तन ढाक्ने स्वतन्त्रता पाए । उता भारत भने अंगे्रेजको अधीनस्थ भयो । भनिन्छः व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभन्दा माथि कुनै स्वतन्त्रता हुँदैन ।
प्राचीन केरलामा पहिरनका आधारमा जात छुट्याइने गरिन्थ्यो । पहिरनका आधारमा जात छुट्याइने समय विस्तारै इतिहासको गर्भमा लुक्यो ।
नाङ्गेलीको रगतले सिञ्चित उक्त स्थानलाई अहिले मुलच्छी पुरमर÷मुलाचिपा राम्बु अर्थात् स्तनको स्थान/भूमि भन्ने गरिन्छ । आजभोलि केरलावासी यो नाम लिन हिचकिचाउँछन र भन्छन् मनोरमा कवलारजक्शन पनि भन्छन् ।
तर, सभ्यताले इतिहास भुलाउन ठूलै प्रपञ्च रचेको छ । मुलक्करमको विरोधमा आफ्नै स्तन काट्ने नाङ्गेली (सुन्दरी)लाई अहिले भारतीय इतिहासबाट समेत विलयन गराइएको छ ।
सन् २००६ मा भारतको विद्यालय पाठ्क्रमको पहिरन तथा जाति शीर्षकमा नाङ्गेलीको कथा राखिएको थियो । सन् २०१६ मा नाङ्गेलीको कथा विद्यालय पाठ्यक्रमबाट हटाइयो ।
पाठ्क्रमबाट नाङ्गेलीको संघर्ष हटाएको विरोधमा भारतीय इतिहासकारले आवाज उठाउँदा पनि सरकार बहिरो बन्यो । त्यसपछि नाङ्गेलीसहित अन्य विमति राखेर भारतीय दलित समुदाय आन्दोलित बन्यो ।
यही विषयलाई लिएर अगस्ट २०१७मा भएको आन्दोलनमा हिंसा भड्कियो । आन्दोलनमा हिंसा भड्काएको र माओवादीसँग सम्बन्ध बनाएको भन्दै भारत सरकारले पाँच जनालाई गिरफ्तार गर्यो । यसरी गिरफ्तार भएका र दलितको पक्षमा उभिनेलाई भारतमा अहिले अर्बन नक्सल भन्न थालिएको छ ।
(विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट)
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १६, २०७६, ०७:५६:००
३० वर्षदेखि रौतहटमा 'आलम त्रास'